PSJTV | तीन कविहरु एकसाथ (भिडियोसहित)
तीन कविहरु एकसाथ (भिडियोसहित)
सोमबार, ११ भदौ २०७५ बच्चु हिमांशु
काठमाडौं: समकालिन नेपाली साहित्यमा एक उत्कृष्ट नाम कवि सञ्जीव राई मञ्चमा प्रस्तुत हुँदै यसरी आत्मालाप गर्छन्:
'मौनताको भाषा सिकेपछि
ढुङ्गासंग बोलें म'
मानिस सबैसंग बोल्दाबोल्दा अन्तत: आफैंसंग बोल्न बिर्सन्छ। ऊ आफूसंग बोल्न थालेको दिन कसरी प्रस्तुत हुन्छ होला? कवि सञ्जीव आफ्नो कविता 'वार्तालाप'मार्फत आत्मपरक अनुभूतिका साथ यसको सजीव जवाफ दिन्छन्। विश्वप्रशिद्ध चित्रकारले आफ्नो कलामा सुन्दर रङहरु खेलाएजस्तै कवि सञ्जीव आफ्ना कविताहरुमा चित्ताकर्षक 'क्राफ्टिङ' गर्छन्। अनि ती कविताहरु उनी मञ्चबाट यसरी पस्किन्छन् कि, मानौं 'म्याडम टुसाड्स'भित्र मूर्तिहरु प्रदर्शनीमा राखिएका छन्, र तिनलाई आँखा नहटाइकन हेरिरहन मन लाग्छ। आफ्नो मिठो मुस्कानसंग सिमलको भुवाजस्तो नरम कण्ठध्वनिले उनी श्रोताहरुलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन्। समय गएको पत्तै नदिइकन उनी एकदेखि अर्को कविता सुनाउँदै जान्छन् र सकिंदासम्म फेरि सुनाउन आग्रह गर्ने बनाइछाड्छन्।
'बहानाका अनेकानेक चोर बाटाहरु पत्ता लगाउँदै
तिमीलाई भेट्न दिनदिनै आउने गरेको
बानी परेर पो त!'
कवि सञ्जीव कहिले मुक्त अनुभूतिको उत्कर्षका कुरा लेख्छन्। कहिले उनी प्रेमील भावनाको सागर जमाउन शब्दका कञ्चन गङ्गाहरु बटुल्छन्। उनी कविका रुपमा जेपनि गर्छन्, तिनलाई अन्तर्मनदेखि हेरिरहूँजस्तो लाग्छ, मश्तिष्कको उत्कट विशिष्टताबाट पढिरहूँजस्तो लाग्छ र मदहोस भएर सुनिरहूँजस्तो लाग्छ।
कहिल्यै नबिर्सिने कतिपय कुराहरु मनमा खेल्दा थोरै समयमात्रै खेल्छन्। तर ती यादहरु जतिपटक पुनरावृत हुन्छन्, झन् गाढा भएर आउँछन्। कवि प्रकाश रम्घाली यस्तै कविता लेख्छन्, जुन घरिघरि पुनरावृत हुने पुरानो मायालुको झझल्कोजस्ता छोटा र मिठा हुन्छन्। पूर्णिमाको रातको जूनजस्तो शीत्तल कविता लेख्न माहिर यी कवि मञ्चमा प्रस्तुत हुन थालेपछि आफसेआफ शीत्तलताको वर्षा हुन्छ।
'झरी थामिएपछि छाता भेटिनु
वा प्रेम सकिएपछि प्रेमिका भेटिनु
सायद उस्तै हुँदो हो धेरैका लागि।'
कवि प्रकाश रम्घालीको शब्दचयनमा यति माधुर्य छकि, उनी भयरसमा लेखिनुपर्ने कवितापनि बडो मिठासपूर्ण ओजका साथ पस्कन सक्छन्। उनी युद्धका कुरापनि यसरी लेख्न सक्छन् कि, मानौं पहिलोपटक डेटिङ गएको एक प्रेमीले प्रेमिकाको आँखामा हेरेर प्रेमका मिठामिठा कुरा भनिरहेको छ।
नथाक्दै जीवनको अन्तीम खुट्किलामा
भर्खरै ईन्द्रेणीमा नुहाएर घाम तापिरहेको
एउटा सुकिलो आदिवासी आकाशझैं।'
रोल्पाबाट भर्खरै राष्ट्रिय कविता महोत्सवको ताज पहिरेर आएका कवि प्रज्वल अधिकारी जति युवा छन्, त्योभन्दा सयगुणा बढी युवाजोश उनी कवितामार्फत पोख्छन्। शब्दशब्दमा 'चे' बोलिरहेजस्ता लाग्ने उनका कविताहरु उनी सायद 'क्युवा'बाट आयात गर्छन्। कविताबाट क्रान्ति सम्भव छ र शब्दहरुको प्रहारले पुराना रद्दी मान्यताहरुको सफाया गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण कवि प्रज्वल अधिकारीको सृजना हो।
'तिमी आउनुको सट्टा
मिक्का सिंहलाई पठाइदिएको भए हुने
उनी आएको भए
हामीलाई अङ्ग्रेजी महिना सिकाएर जान्थे
तिमीलाई थाहा छ नि
अङ्ग्रेजीको महत्व कति छ।'
समाजका विसङ्गतीहरुलाई शब्दको शक्तिले निमिट्यान्न पार्ने हैसियत कसैसंग छभने त्यो विशेषता कवि प्रज्वलसंग छ। उनी कवितामा विद्रोहमात्रै ओकल्दैनन्, त्योभित्र सुन्दर बिम्बपनि गाँस्छन्। उनी वैचारिक क्रान्तिलाई यति कलात्मक बनाइदिन्छन् कि, मानौं कविताबाटै अबका सम्पूर्ण परिवर्तन सम्भव छन्। कवितामार्फत वैचारिक क्रान्तिको कलात्मकतामा विचरण गर्दै उनी विकृतिहरुलाई मन्थन गर्छन् र सृजनात्मक निचोड निकाल्छन्। अपार सम्भावनाका दृष्टान्त यी कवि यतिबेला आफ्ना प्रत्येक कवितामा आगो ओकलिरहेछन्।
जीवन कहिले फेरिन्छ?'
आफ्ना पाँचपाँच कविताहरु लिएर तीन कविहरु लाजिम्पाटको एउटै मञ्चमा सोमबार प्रस्तुत भए। कविहरु सञ्जीव राई, प्रकाश रम्घाली र प्रज्वल अधिकारीले आआफ्नो शैलीमा प्रस्तुत हुँदै 'डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय'को भवनमा एउटा ऐतिहासिक छाप छोडे। 'समय र कवि,' 'सपना,' र 'जिन्दगी, अहम् र स्वप्न फूलहरु' गरी तीनवटा उत्कष्ट कविताकृतिका सर्जक कवि सञ्जीव राईले कवितावाचनको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि शब्दमाधुर्यका उस्ताद कवि प्रकाश रम्घालीले आफ्ना कविताहरु अति मिठो स्वरमा वाचन गरेका थिए। अन्तिममा प्रस्तुत भएका कवि प्रज्वल अधिकारी आफ्ना कविताहरु वाचन गर्दैगर्दा आगोको लप्का ओकलिरहेजस्ता प्रतित हुन्थे।
सोमबारको मध्यदिउँसो आयोजित उक्त कवितावाचन समारोह दुई चरणमा विभाजित थियो। पहिलो चरणमा तीन कविहरुले आफ्ना तीनतीनवटा कविता प्रस्तुत गरेभने दोश्रो चरणमा सबैको भागमा दुईदुईवटा कविता परे। कवि तथा चित्रकार रसिक राजले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रम 'सर्वोत्तम राष्ट्रिय साप्ताहिक'को आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो।